Ukubaluleka kunye nokuhlelwa kokupakisha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kunye nokuhlelwa kokupakisha
UJorge Neira | | Idizayini yeMifanekiso, Ukuphefumlelwa
Kwanele ngohlobo lweklasikhi egrey, isikwere kunye neenkonkxa ezilula. Ngoku siye kwelona xesha langoku kwaye sixoxe nge indlela entsha yokukhuthaza imveliso ukusukela ngoku une ukupakisha okanye "imbonakalo" ezandleni zakho.
Namhlanje siza kukuxelela malunga nokupakishwa okwaziwayo, i Inkqubo yoyilo kunye neyantlandloloón inento efana nayo nayiphi na enye imbonakalo kwaye zenziwe ngephepha okanye kwikhadibhodi. Sibonile ukuba imveliso esiyisongelayo ngezinto esizisebenzisayo ukuyenza ukuba nefuthe kakhulu, kodwa ukuba singathetha into, yile Lo ngumbuzoá Mébonke uMáIsetyenziselwa ukupakisha.
1 Ukupakisha kunokusetyenziselwa yonke into
2 Ixesha langoku kunye notshintsho kuyilo lwakho
3 Izibonelelo zokupakisha kunye nokuzisebenzisela zona!
4 Iingxaki zokupakisha: Ayizizo zonke izinto ezilungileyo njengoko zazibonakala
Ukupakisha kunokusetyenziselwa yonke into
Nokuba ibhokisi elula yekuki okanye irayisi evela eTshayina, ungasebenzisa e mékonke ukupakishaIkwasebenza ukwenza umboniso wentsingiselo olonwabisayo iliso lakhe nawuphina umthengi obonayo aze athathe isigqibo sokuthenga imveliso yakho. Ukongeza, yenye yezona zinto zixhaphake kakhulu phaya, kuba singayinika imilo esiyifunayo.
Emva koko sinokuprinta umbala esiwufunayo kwaye yindawo efanelekileyo yokudlala kunye neefonti, yintoni enye onokuyicela?
Into ekufuneka siyigcinile engqondweni kukuba kunjalo a f izinto kakhuluáIilwimi ze Sebenzisa onokuyisebenzisa kwizinto ezininzi. Namhlanje sikulethela imizekelo yaba bafana sinethemba lokuba uyayithanda kwaye uyayikhuthaza!
Ixesha langoku kunye notshintsho kuyilo lwakho
Ngaba ukhe wakucinga ukusebenzisa kwakhona i- ubugcisa bemizobo amatyeli aliqela, kodwa kwiintetho ezahlukeneyo? Ewe impendulo kukuba awusayi kuphinda ube nezo ntloko kuba uya kuba nakho ukuphinda usebenzise zonke uyilo lwakho.
Ngoku, ngokugcina nje umsebenzi wakho ngonqakrazo olumbalwa, sele uqinisekisa umzamo wakho xa ucinga ukuba kunyanzelekile ukuba uphinde kwaye uwenze ukhanye, ngoku ngokwaneleyo ukunika i úNdisebenzisa yonke imisebenzi yakho, qalisa ukwenza ntsha kwakhona.
Izibonelelo zokupakisha kunye nokuzisebenzisela zona!
Kwiminyaka yakutshanje, ezininzi izixhobo zokwenza izinto ezintshaón yeepakethe zokupakisha okanye zokupakisha, ngenjongo yokufumana umahluko wophawu.
Ukuza kuthi ga ngoku ukuba iinkampani ezinkulu zibeke imizamo yazo ekukhuthazeni iiprojekthi zendaloón, isekwe kupakisho lobugcisa apho iinjongo zokugqibela zahluke kakhulu: fumana uphuculo kunye nokusebenza okuguqulela kwiindleko zokusebenza eziphantsi, ukwazisa izisombululo ezizinzileyo nezilungele indalo, ukuphucula ukhuseleko kunye nokuthembeka kwayo yonke imisebenzi, ukongeza ubomi kunye nokuvela okuninzi
Inkampani nganye inayo umnwe kwaye ikufezekisa oku ngokudibanisa imodeli enokuthi iphinde iphinde iphindwe kwiimveliso zayo, kodwa oko kutshintsha kancinci kwimiboniso yayo kwaye ihlala iqulethe eyona nto iyimveliso ngokwayo.
Iingxaki zokupakisha: Ayizizo zonke izinto ezilungileyo njengoko zazibonakala
Eyona ngxaki iphambili ekupakisheni ngumjikelo wobomi obufutshane, oguqula u impembelelo ephezulu yokusingqongileyo, okoko nje emva kokudalwa kwayo iba yintsalela. Ngamnye wabathengi, ngandlela thile, ugcina isikhongozeli kangangeentsuku ezimbalwa okoko kubonakala ngathi kuyinto entle kakhulu okanye ukuba nje ayiphazamisi ukuba nayo egumbini, kodwa inyani kukuba xa abo Amaxesha afikayo, kunzima kakhulu ukucinga ukuba imeko-bume ayizukuthatha nto.
Ngezizathu zolondolozo, umzekelo, yonke inqweloón inkunkuma inomjikelo wobomi omde kakhulu, Ukuqinisekisa uzinzo oluphezulu kunye nokunciphisa zombini i-carbon footprint kunye nokukhutshwa kwe-CO2 yeetyathanga zonikezelo eziziqhubayo kunye nokusetyenziswa apho kuguqulwa khona. Uluntu ngakumbi nangakumbi luyakhuthazwa ulwazi ngendalo Ukukhula kubathengi, beka lo mbono kwimigaqo-nkqubo yabo yokhathalelo lwendalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukubaluleka kunye nokuhlelwa kokupakisha
Iimpawu zewebhu: Uyilo kunye neeNgcebiso ngokuSebenzisa